Mahazo mailaka mahaliana avy amin'ny Tim Cook | Vaovao IPhone
Tim Cook no CEO an'ny Apple, orinasa manandanja indrindra eran-tany. Amin'ny faran'ny keynotes rehetra, matetika mandefa mailaka amin'ny mpiasa rehetra an'ny orinasanao: na Genius na fametrahana fitaovana ao amin'ny trano fanatobiana entana. Raha ny filazany dia mandrafitra ilay orinasa lehibe daholo ireo mpiasa ary izany no izy. Raha tsy nisy injeniera, dia tsy ho nisy ireo gadget mahafinaritra rehetra ireo, ary raha tsy nisy ny fivarotana biriky, dia tsy ho afaka hamaha na hitsapa ny vokatr'ilay orinasa ny mpampiasa. Apple daholo izy ireo ary fantatr'i Tim Cook izany. Isaky ny fehezanteny tsirairay dia misaotra azy ireo izy tamin'ny asa vitan'i sy ho an'i Apple.
Androany, ny mpiasan'ny Apple dia nahazo mailaka avy tamin'i Tim Cook miresaka ny asany sy loka ihany koa amin'ny asany: fialantsasatra bebe kokoa ho an'ny Thanksgiving. Aorian'ny fitsambikinana dia manana ny mailaka iray manontolo sy ny famakafakana azy ianao.
Fahavaratra nahafinaritra iny. Sambany izahay nandefa vokatra roa vaovao ho an'ny iPhone. Ny iOS 7 dia noforonina tamin'ny fiaraha-miasa lalina teo amin'ny ekipa mpamolavola sy injenierantsika anay, nitondra ny mpanjifanay interface tsara vaovao sy fampiasa vaovao. Mampahafantatra ny OS X Mavericks sy ny Mac matanjaka indrindra vitavita. Mankalaza dingana vaovao vaovao ny App Store - fisintomana 50 miliara. Ary manohy maneho ny fitiavantsika mozika amin'ny iTunes Radio sy ny iTunes Festival izahay.
Nanararaotra nitsidika ny fivarotanay sasany aho nandritra ny fandefasana ny iPhone. Tsy misy toerana tsara kokoa hijerena sy hahatsapana ny antony maha-manokana an'i Apple. Ny vokatra tsara indrindra amin'ny tany. Angovo. Hafanam-po. Ny mpanjifa tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mahaliana dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona. Vokatra vaovao manome ny soatoavina lalina indrindra sy hetahetan'ny olona farany.
Ary faly aho milaza fa ny Apple koa dia hery manatsara an'izao tontolo izao mihoatra ny vokatray. Na ny fanatsarana ny toe-miasa na ny tontolo iainana, ny fiarovana ny zon'olombelona, ​​ny fanampiana amin'ny fanafoanana ny SIDA, na ny famerenana amin'ny laoniny ny fanabeazana, Apple dia mandray anjara lehibe amin'ny fiarahamonina.
Tsy nisy nety ho nisy izany raha tsy teo ianao. Ny loharanom-bola tena manan-danja indrindra dia tsy ny vola, ny fananana ara-tsaina na ny fananana renivohitra. Ny loharano manan-danja indrindra dia ny - ny fanahy - ny olona.
Tsapako fa maro aminareo no niasa tsy nanasasatra nitondra antsika teto. Fantatro fa mila fahafoizan-tena lehibe izany.
Ho fankasitrahana ireo ezaka sy zava-bitanao mahatalanjona, faly aho milaza fa manitatra ny fetin'ny Thanksgiving isika amin'ity taona ity. Hikatona amin'ny 25, 26 ary 27 Novambra isika mba hahafahan'ny ekipanay manana fialan-tsasatra mandritra ny herinandro. Ny mpivarotra antsinjarany, AppleCare ary ekipa sasany dia tsy maintsy miasa amin'io herinandro io mba hahafahanay manohy manompo ireo mpanjifantsika. Fa izy ireo dia handray ny andro tsy fiasana mitovy amin'ny fotoana hafa. Azafady mba jereo miaraka amin'ny mpitantana anao raha mila fanazavana fanampiny. Ireo ekipantsika iraisam-pirenena dia handahatra andro fialantsasatra amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny firenenao manokana.
Manantena aho fa ny fotoana fanampiny dia fitsaharana sy fialan-tsasatra. Mendrika izany ianao. Ho hita ao amin'ny AppleWeb tsy ho ela ny antsipiriany.
Tena reharehako ianareo rehetra. Gaga aho ny zava-bitao ary tsy afaka mientanentana kokoa amin'ny ho avy aho. Ankafizo ny fotoana fialantsasatra!
Ireo hevi-dehibe ao amin'ny mailaka Tim Cook
fialan-tsasatra: Araka ny hitanao amin'ny mailaka dia manome fialantsasatra bebe kokoa ho an'ny mpiasa Apple. Amin'ny 25, 26 ary 27 Novambra izy ireo, izany hoe hanana fialan-tsasatra iray herinandro manararaotra ny Thanksgiving (Etazonia)
Exception: Tsy ny olona rehetra no hanana fialan-tsasatra amin'ireo daty ireo. Ireo mpiasa amin'ny Retail, Apple Care ary serivisy hafa dia hiasa amin'io herinandro io mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny olona mankany amin'ny magazay ara-batana. Hanao fotoam-pialan-tsasatra hafa izy ireo mandritra ny taona. Azo antoka fa ho an'ny Noely na Paka.
Misaotra: Tim dia nifantoka be tamin'ny fisaorana ireo rehetra nanao Apple. Azo antoka fa nahavita tsara izy ireo fa ahoana kosa raha misy vokatra na keynote vaovao ho avy? Mazava fa manome fialantsasatra izy ireo ka miverina amin'ny herin'ny hery ...
Fanazavana fanampiny - Apple no orinasa sarobidy indrindra eto an-tany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mahazo mailaka mahaliana avy amin'i Tim Cook ireo mpiasan'ny Apple
Fiarovana herinaratra: vonoy ny kaody miaraka amina kaody (Cydia)